Hihaona vehivavy amin’ny bedeux
Raha mamaly ENY mba saika ny rehetra ireo fanontaniana ireo, ary te-hahita ny vehivavy fa tsy azo antoka izay bedeux dia atao ho anao, ka mamaky ny fijoroana vavolombelona ny mpikambana bedeux izay efa nihaona ny vadiny ny alalan ny»izaho dia nihaona tamin’ny vehivavy iray teo amin’ny fiainako avy ny andro voalohany. Ny mombamomba azy dia natolotra ahy avy hatrany. Izaho no voalohany kely misalasala mba handray ny voalohany ary avy eo dia hoy aho hoe ny tenako fa raha tsy miezaka ny vintana ankehitriny, mino aho fa tsy hahomby. Noho izany dia nanoratra ny voalohany kely hafatra aho ary nandray tena haingana kely voalohany valiny. Izahay aloha nifanakalo hafatra vitsivitsy ao amin’ny habaka bedeux ary avy eo isika dia nifanakalo amin’ny mailaka sy ny nomeraon-telefaonina. Izahay dia nandray ny fotoana fa amin’ny farany izany rehetra izany no nitranga haingana be noho isika efa samy tany am-boalohany eritreritra. Farany izahay ary misaotra bedeux nahita ny tsiron’ny fiainana araka ny fisaraham-panambadiana sy ny fahadisoam-panantenana ny tsirairay amin’izy ireo.»hoy i Francis.»Na dia tsy tena nafana fo tamin’ny hevitra ny handeha amin’ny alalan’ny fiarahana club hahita ny vehivavy ny fiainako aho tamin’ny farany dia nifidy ny iray amin’ireo tsara indrindra fantatra ho ahy mba hisorohana ny ratsy tsy ampoizina. Rehefa afa-tsy tapa-bolana aho no nihaona tamin ny vehivavy iray izay ankehitriny dia mizara ny fiainana sy isika dia mahafantatra fa ny ho avy ho an’ny ny antsika.». Ny fivoriana dia haingana, sy ny mpiaro ny Estelle ny manao zavatra (ny ahy loatra), ny fitiavana nitombo haingana toy izany fotoana izany isika ankehitriny, Ianao koa dia afaka mahita ny vehivavy ary lazao anay ny momba ny fivoriana miaraka amin’ny fanahy vady. Ny toetra fitsapana dia ny dingana voalohany, ary avy eo dia afaka mahita ny tsara vadiny ao amin’ny lisitry ny soso-kevitra mpiara-miasa.
Dia naka fifandraisana amin’ny asabotsy maraina. Rehefa nanoratra hafatra vitsivitsy nandritra ny andro vitsivitsy, dia nanapa-kevitra izahay mba jereo izany amin’ny olona. Natahotra aho fa ny zava-drehetra dia tahaka izay efa an-tsaina. Nihaona tamin’ny bedeux tamin’ny fahavaratra farany teo. Nieritreritra aho fa hahita ny fitiavana fa izany no nitranga. Tena feno fankasitrahana izahay ho efa hitafy ny lalan ny hafa.
Misaotra anao bedeux
Efa niezaka aho ny toerana hafa fa tsy fahombiazana. Tsy manana fanantenana be loatra amiko ny fanaovan-tsonia amin’ny bedeux fa tsy ho ela aho no mpijery rehefa nahita ny fomba manokana ny toerana. Ny lisitry ireo mpiara-miombon’antoka no nanome ahy ny faniriana hiditra amin’ny fifandraisana sy amin’ny lehilahy izay nihaona taminay dia tena tsara. Aho nanao ny fitsapana amin’ny alalan’ny famoronana ny mombamomba azy ao amin’ny bedeux. Tsy ho ela aho dia nanomboka nahazo tolotra avy amin’ny mpiara-miasa ary izay no nihaonako Sylvie.
Tena faly izahay miara
Nahita ny tsara ny olona, Isika rehetra anjara. Efa nianatra mahalala antsika tsikelikely, ary izahay hita in-efatra teo aloha hanoroka. Porofo fa hoe ny aterineto dia tsy voatery ho mitovy dika ho rotsakorana. Fivoriana olona vaovao dia tsy mbola mora kokoa noho ny Internet. Fa inona no soa izany mba hiresaka momba saika amin’ny am-polony maro ny olona tsy mahafantatra akory na ny tena fifandraisana afaka mamorona miaraka aminy
← Chatroulette Arabo - Video Search Engine amin'ny Fikarohana
Hihaona vehivavy amin'ny bedeux →